Sakafo hohanina amin'ny sakafo fanoherana ny inflammatoire | Bezzia
Sakafo azo hanina amin'ny sakafo anti-inflammatoire
Toñy Torres | 16/07/2021 14:00 | Vatsim-pivelomana
Ny sakafo lanina rehetra dia miteraka valiny ao amin'ny vatana, indraindray miabo ary indraindray mety ho ratsy. Na manao ahoana na manao ahoana voajanaharin'ireny sakafo ireny dia mety misy ny toe-javatra toy ny pathologies na aretina izay sakafo sasany dia mampidi-doza kokoa noho ny mahasoa. Ny zavatra toa an'io dia izay mitranga amin'ny aretina autoimmune, indrindra ireo izay miteraka fivontosana lava.
Ny fivontosana dia valiny voajanahary amin'ny vatana, rafitra fiarovana amin'ny fandrahonana. Rehefa miditra amin'ny vatana ny bakteria na virus iray dia mamaly izany amin'ny alàlan'ny fandoroana ilay faritra hisorohana azy tsy hitatra sy hanimba ireo faritra manodidina hafa. Ny olana dia indraindray ny fivontosana dia mety hanjary mitaiza, ary mitera-doza amin'ny karazana aretina hafa matotra.
1 Sakafo fanoherana ny inflammatoire, ao anatin'izany no anoroana azy
1.1 Sakafo 5 tokony ampidiroinao amin'ny sakafo fanoherana ny inflammatoire
1.2 Ahoana ny fomba hisorohana ny fivontosana maharitra
Sakafo fanoherana ny inflammatoire, ao anatin'izany no anoroana azy
Ny sakafo fanoherana ny inflammatoire dia natao ho an'ireo olona mila manohitra ny vokatry ny fivontosana lava, toy ireo marary manana aretina autoimmune. Misy koa atolotra ho an'ny olona te hanana fomba fiaina mahasalama kokoa. Koa satria anisan'ireo tombontsoa maro hafa, ity sakafo ity dia manampy amin'ny fampihenana ny kolesterola, ny fanafainganana ny fihenan-danja, ny fihenan'ny aretina aretim-po ary ny fihenan'ny haavon'ny glucose ao amin'ny ra.
Ity sakafo ity dia misy fampidirana sakafo izay, noho ny sakafo mahavelona azy, dia manao asa fanoherana ny inflammatoire ao amin'ny vatana. Ary koa manala ireo rehetra izay mety hiteraka na hampitombo ny fivontosana. Ity karazan-tsakafo ity, toy ny sakafo hafa fetra, ny dokotera na ny mpitsabo sakafo. Indrindra raha mijaly amin'ny aretina ianao mba hisorohana ny loza mety hitranga amin'ny fahasalamanao.
Sakafo 5 tokony ampidiroinao amin'ny sakafo fanoherana ny inflammatoire
Ankoatry ny fanovana ny sakafonao, hampihenana ny fivontosana maharitra dia zava-dehibe tokoa ny fanovana ny fahazarana. Ny torimaso tsara dia ampahany lehibe, ary koa esory ny paraky sy ny akora rehetra mety hanimba amin'ny fahasalamana. Raha ny sakafo, ny sakafo dia mifototra amin'ny sakafo voajanahary, legioma sy voankazo, trondro misy menaka, atody, solika, zava-manitra ary zavamaniry.
Ny lisitry ny sakafo azonao hanina dia lava, noho izany dia tsy sakafo famerana. Na izany aza, zava-dehibe ihany koa ny fampidirana ireo sakafo manohitra ny inflammatoire, toy ny fanafoanana ireo izay tena manimba. Toy ny siramamy, sakafo voahodina, menaka legioma, gliosida voadio, paraky, alikaola ary hena voahodina. Raha ny ny sakafo tokony ampidirinao amin'ny sakafo fanoherana ny inflammatoire, ireo no tsara indrindra.
Voa Chia sy masomboly: Heverina ho sakafo faran'izay mahery sy fototry ny sakafon'ny olona maro ankehitriny, ny voa chia sy ny flax dia manana fananana mahavelona be. Anisan'izany ny asidra matavy Omega3, izay fanoherana voajanahary voajanahary.
Legioma cruciferous: Toy ny arugula, broccoli, laisoa, tsimoka any Bruxelles, na radia.
Tamotamo: Anisan'ireo zava-manitra, mahasoa indrindra amin'ny sakafo fanoherana ny inflammatoire. Tsy ho an'ny zava-poana fa ny turmerika dia ampitahaina amin'ny sehatra voajanahary amin'ny ibuprofen.
Ny voankazo mena: Ny Cranberry, ny voaroy na blackberry dia voankazo manankarena antioxidants ary manana toetra manohitra ny inflammatoire lehibe.
Legioma maintso: Ny klorofila ao anaty raviny dia manampy amin'ny fampihenana ny fivontosana, ary koa manankarena vy sy mineraly izay mampiroborobo ny fandroahana poizina amin'ny vatana.
Ahoana ny fomba hisorohana ny fivontosana maharitra
Raha mijaly matetika ianao amin'ny ratra amin'ny hozatra, manana fizarana adin-tsaina, fanahiana na famoizam-po, ary koa fikorontanana ara-pihetseham-po matetika, ao anatin'izany ireo sakafo ireo amin'ny sakafo fihinanao dia mety ho mendri-piderana tokoa. Ny fivontosana maharitra dia iray amin'ireo zava-dratsy lehibe ateraky ny taonantsika, aretina iray mahazo ny olona maro kokoa. Betsaka ny antony atahorana, ny fandotoana, ny fanjifana sigara, ny adin-tsaina, ny tsy fahampian'ny torimaso ary ny sakafo tsy voajanahary sy tsy dia mahazatra loatra.
Amin'ny tranga sasany, ny fivontosana maharitra dia tsy azo sorohina, toy ny amin'ny aretina sasany toa ny Arteritis Takayasu. Saingy amin'ny ankabeazan'ny toe-javatra dia azo sorohina amin'ny sakafo ara-pahasalamana mahasalama kokoa sy fahaverezan'ny taompolo lasa izay. Mihinàna hiaina fa tsy harary, tokony ho Maxim ianao raha te hikarakara ny fahasalamanao. Ampidiro ao anaty sakafo fanoherana ny inflammatoire ireto sakafo ireto ary ho hitanao tsy ho ela ny fahasamihafana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » fahasalamana » Vatsim-pivelomana » Sakafo azo hanina amin'ny sakafo anti-inflammatoire
Karazan-seza samihafa ho an'ny efitrano fisakafoanao